हेर्नुहोस आजको राशिफल : बिहिबार कुन राशिको दिन कस्तो रहला ? – Khabarhouse
Khabar house | १६ पुष २०७७, बिहीबार ०१:५८ | Comments
ज्योतिषि डिपि भण्डारी : विसं. २०७७ साल पौष १६ गते । बिहीबार । ईश्वी सन् २०२० डिसेम्बर ३१ तारिख । नेपाल संवत् ११४१ । प्रमादी संवत्सर । दक्षिणायन । हेमन्त ऋतु । श्रीशाके १९४२ । पौष कृष्ण पक्ष । तिथि–प्रतिपदा, ०५ घडी ५६ पला, बिहान ०९ बजेर १९ मिनेट उप्रान्त द्वितीया । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ०६ बजेर ५६ मिनेट, सूर्यास्त बेलुकी ०५ बजेर १७ मिनेट ।
मेष : व्यापार व्यावसायबाट सोचे जस्तो आम्दानी नभएपनि घा’टा लाग्ने छैन । यात्रा गर्दा विशेष ख्याल गर्नुहोला गन्तव्य पहिल्याउन मु’श्किल पर्नेछ । माया प्रे’ममा नजिक हुँदा अ’विश्वास बढ्ने हुनाले आजको दिन टाढै रहनु उचित हुनेछ । आफन्त तथा दाजु भाइसँग सानो कुरामा वि’वाद बढ्नेछ भने गैर न्या’यीक कामहरु नगर्नुहोला समय तपाईंको पक्षमा रहेको छैन । खेलकुद तथा साहसिलो क्षेत्रमा पनि तपाईंको पक्षमा नतिजा नआउन सक्छ ।
वृष : व्यापार व्यावसाय फ’स्टाएर जानेछ भने होटल तथा रे’ष्टुरामा लगानी गरी मनग्गे आम्दानी गर्न सकिनेछ । आत्मिय मित्र तथा साथी भाइहरुको सहयोगले सकारात्मक कामहरु गर्न सकिनेछ । अध्ययन तथा अध्यापनमा मन जाने हुनाले नतिजा आफैतिर ल्याउन सकिनेछ । माया प्रे’ममा सामिप्यता बढेर जाने तथा पति प’त्नी बीच वि’श्वासको वातावरण बढ्नेछ । बोलीको प्रभाव बढ्ने हुनाले बोलेरै मनग्गे आम्दानी गर्न सकिनेछ ।
मिथुन : राजनीति तथा समाजसेवामा गरिएको लगानीबाट भने जस्तो उपलब्धि हासिल हुनेछ भने राज्यबाट पद प्रतिष्ठा पाउने योग रहेको छ। व्यापार व्यावसाय फ’स्टाएरु जाने हुनाले थप लगानीको लागि रुपैयाँ जुटाउन सहज हुनेछ । सुन्दर तथा विलासी वस्तुको प्रयोग गर्न पाइने तथा सुन्दर वस्त्र पहिरनले अरुको मन आफूतिर आकर्षित गर्न सकिनेछ । पढाइ लेखाइमा उत्कृष्ट नतिजा हात पार्दै अगाडी बढ्न सकिने ग्रहयोग रहेको छ ।
कर्कट : लामो दुरीको वैदेशिक यात्रा तय हुनेछ भने विदेशी सामानको व्यापार व्यावसाय फ’स्टाएर जानेछ । स्वास्थ्य सम्बन्धि सामान्य समस्या देखा पर्न सक्ने तथा उपचार खर्च बढ्ने योग रहेको छ । अनावश्यक खर्च बढ्ने हुँदा दैनिक खर्च बढेर जानेछ । न्यून पारिश्रमिकमा दिनभर समय व्यतित गर्नुपर्दा अन्य काममा समय दिन सकिने छैन । अल्छी गर्ने बानीले कामहरु बिग्रन सक्छ । माया प्रे’ममा म’नमुटाव सिर्जना हुनेछ ।
सिंह : विभिन्न भौतिक तथा विलासी सामानहरु जुट्नेछन् भने भविष्यमा आम्दानी हुने व्यावसायमा लगानी गर्न सकिनेछ । आयस्रोतका बाटाहरु फराकिला हुनेछन् भने कृषि तथा पशुपालन व्यावसाय फस्टाएर जानेछ । बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यावसायबाट मनग्गे आम्दानी हुनेछ । माया प्रे’ममा नजिक हुने समय रहेको छ । साँझपख लामो दुरीको यात्रा हुनेछ भने विदेशमा बसेर काम गर्नेहरुका लागि समयले साथ दिनेछ ।
कन्या : नोकरीमा अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्नेछ भने सहयोग गर्ने कमै भेटिनेछन् । पहिले निर्णय भैसकेका मु’द्दाहरु आईलाग्ने हुँदा मानसिकक त’नाव बढ्नेछ । सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या आउने हुनाले दैनिक कामकाज गर्न गाह्रो हुनेछ । माया प्रे’ममा आफ्नो मायालुसँग मन मु’टाव बढ्नेछ । आफ्नो भन्दा पनि अरुकै कामको लागि दिनभर व्यस्त रहँदा आफ्नो काम थाती रहनेछ ।
तुला : लामो दुरीको धा’र्मिक तथा शैक्षिक यात्रा गर्न सकिनेछ भने यात्राका क्रममा महत्वपूर्ण व्यक्तिहरुसँग भेटघाट हुनेछ। व्यापार व्यावसायमा लगानी गरी प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिनेछ भने तपाईंको काममा आफन्त तथा शुभचिन्तक हरुको सहयोग रहनेछ । माया प्रे’मको गाँठो कसिलो भएर जाने तथा जीवन साथीको सहयोगले राम्रा कामहरु सम्पादन हुनेछन् । प्रतिष्ठित काम गरी समाजमा नाम कमाउन सकिनेछ ।
बृश्चिक : आउने ठाउँबाट रुपैयाँ पैसा नआउनाले बनाएका योजनाहरु थाती हुने छन। व्यापारमा उधारो लगेर नतिर्नेहरु हावी हुनेछन् भने आम्दानी नहुनाले दैनिकी प्रभावित हुने छ । माया प्रे’ममा ति’त्तmता आउने तथा दाम्पत्य जीवनमा एक अर्कालाई शं’काको दृष्टिले हेर्नाले घरमा समस्या उत्पन्न हुनेछ । साँझपख समय राम्रो रहेकोले बैंक तथा शेयर बजारको लगानी भने फ’स्टाएर जानेछ ।
धनु : भौतिक सम्पत्ति तथा सवारी साधनको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला, हतार गरी प्रयोग गर्नाले अ’प्रिय घ’टना न’घट्ला भन्न सकिन्न । जीवन साथीसँगको असमझदारीले दैनिक कामहरु प्रभावित हुने छन् । माया प्रे’ममा नचाहँदा नचाहँदै टाढिनु पर्ने बाध्यता हुनेछ, ध्यान दिनुहोला । व्यापार व्यावसायमा रुपैयाँ पैसाको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा घाटा लाग्न सक्छ ।
मकर : न्या’यिक निर्णयहरु तपाईंको पक्षमा हुने छैनन् भने वाद वि’वाद तथा प्रतिस्पर्धामा भाग लिए हारिने सम्भावना रहेको छ। पुराना समस्याहरु बल्झन सक्छ, ध्यान दिनु होला । अध्ययन अध्यापनमा ध्यान नजाँदा अरुभन्दा पछि परिनेछ । मामा तथा मावली पक्षसँग विवाद बढ्ने योग रहेको छ । साँझपख समय राम्रो रहेकोले व्यापारबाट मनग्गे धन लाभ हुनेछ भने सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोग मार्फत् आफ्ना विचारहरु जनमानसमा लैजान सकिनेछ ।
कुम्भ : विगतका गल्ती तथा कमी कमजोरीहरुलाई सच्याउँदै परिणाम मुखी काम गर्न सकिनेछ । अध्ययनमा राम्रो सुधार गर्दै आफन्त तथा गुरुवर्गहरुको इज्जत राख्न सकिने समय रहेको छ भने शैक्षिक यात्राको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । आ’कस्मिक धन तथा सम्पत्ति हात लागी हुनेछ भने आफूले मन पराएको मानिसबाट उपहार प्राप्त हुनेछ । व्यापारमा लगानी बढाउँदै आम्दानीमा वृद्धि गर्न सकिनेछ ।
मीन : आमा तथा आमा सरहका मानिससँग वि’वाद बढ्ने योग रहेको छ । छा’ती सम्बन्धि सामान्य स’मस्या आउन सक्छ, ख्याल गर्नुहोला । प्रतिस्पर्धीहरुले काममा अवरोध पु¥याउन सक्छन्, ध्यान दिनुहोला । व्यापार व्यवसायमा प्रशस्त समय दिनुपर्नेछ भने कृषी तथा पशुपालन व्यवसाय फ’स्टाएर जानेछ । साँझपखको समय उत्तम रहेकोले आम्दानी बढ्नेछ भने अध्ययनमा सुधार भएर जानेछ । तपाईंको दिन शुभ रहोस् ।